कांग्रेसको बुद्धि कहिले पलाऊने? - Jagaran Post
Home/विचार / दृष्‍टिकोण/सम्पादकीय/कांग्रेसको बुद्धि कहिले पलाऊने?
कांग्रेस बंचाऊने नै हो भने जुझारु युवा नेताले नेतृत्वमाथी हस्तक्षेप गर्नैपर्दछ। हैन भने यस्तै उल्टो दिशाले कांग्रेस इतिहासमा सिमित नहोला भनेर भन्न सकिन्न।
राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको मूल नारा बोकेर हिंडिराखेको नेपाली कांग्रेस पार्टी अहिले आफ्नै अस्तित्व बंचाऊको खोजिमा हिंडिराखेको छ भन्दा फरक नपर्ला। विशेषत: लोकतन्त्रको दुहाई दिएर नथाक्ने कांग्रेस पछिल्लो समय अदूरदर्शी नेतृत्वकै कारण निरन्तर स्खलित छ। पार्टिका हरेक झण्डा र पोष्टरहरु लोकतन्त्रको ठूला ठूला अक्षरहरुले सजाएता पनि वास्तवमा कांग्रेस मूल नेतृत्वको चरित्र अप्रजातान्त्रिक, अलोकतान्त्रिक र अराजक चरित्रको देखिएको छ। नेतृत्वको विवेकहिन चरित्रले समग्र पार्टिलाई नै दिशाहिन बनाईदिएको छ। बुढो र ढर्‍ओ नेतृत्व जति पुरातन हुन्छ, गतिशिल समयसंगै दौडिनुपर्ने संस्था झनै मक्किएर गएको छ।
स्पष्ट नै छ, कांग्रेस सभापति शेरवहादूर देउवाले न नै मक्किएको पार्टिलाई पुनर्जिवन दिन सक्छन न नै पार्टिलाई लोकतान्त्रिक चरित्रको बनाऊन सक्तछन। सरकारमा रहंदा बारम्बार असफल नेतृत्व दिएका देउवाले स्वाभाविक नै छ पार्टिलाई समेत सक्षम नेतृत्व दिनै सक्तैनन। यतिकुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि इतिहासको विरासत बोकेको पार्टी नेपाली कांग्रेसले यो समयसम्म आईपुग्दा देउवाकै नेतृत्वले काम चलाऊन बाध्य हुनु विडम्वनाको विषय हो।
बिपी र गणेशमानहरुको आदर्श, निष्ठा र त्यागको पवित्र मार्गबाट धरमराऊँदै गिरिजादेखि देउवासम्म आईपुग्दा सायद आज यौटा असल र निष्ठावान कांग्रेस सदस्यलाई कांग्रेस भएकै कारण चरम् लज्जावोध हुँदोहो। पार्टि संस्थापनको मूल मर्म र लक्ष्यप्राप्तीलाई चटक्कै कुल्चेर प्रजातान्त्रिक भनिने सिंगो पार्टि नेतृत्व आजका दिनसम्म आईपुग्दा गुण्डा, तस्कर, हत्याराहरुको दयामामाया चल्नेसम्मको अवस्थामा आएको देख्दा सायद पुराना निष्ठावान कांग्रेसहरु वर्तमान नेतृत्वप्रति नै धारेहात लगाऊँदाहुन। अपराधीले अपराध गरेर लुटेको रकमको थैलो नेताका दैलोसम्म नपुगिकन कसरी कांग्रेसले अपराधीको संरक्षण गर्छ त? कुरो सपाट छ, लोकतान्त्रिक पार्टिभित्र गुण्डा र अपराधीको हालीमुहाली छ। अपराधीले अनेकन अपराध गरेर लुटेको सम्पत्ति नेताका दैलासम्म पुग्छन, बम्परमा त्यस्ता अपराधीहरु सांसद हुँदै मन्त्रीसम्म हुन्छन र वैधानिकरुपमैं राज्यको शक्ति र सम्पत्तिको दोहन गरि पुन: राज्य लुट्ने काम हुन्छ। बैधानिक रुपमा नसके पद र शक्तिको दुरुपयोग गरेर राज्यमा अपराधआतंक मच्चाएरै भएपनि लुट्ने फेहरिस्तमा कांग्रेस पनि अग्रपंक्तिमै देखिएको छ।
कल्पनासम्म पनि गर्ननसकिने राज्यको खुंखार गुण्डालाई गिरिजाले कोखी च्यांप्दाको परिणति रौतहटका बासिन्दाले बेहोर्नुपर्यो। गिरिजा, सिटौला, गच्छदार हुँदै अहिले शेरवहादूर देउवाले समेत त्यस्तो खुंखार अपराधी गुण्डाको पक्षमा वकालत गर्दा सायद लाखौं कांग्रेसीजनको शिर लाजले निहुरिएको होला। केही मुट्ठीभरका नेताहरु जो उक्त अपराधीले लुटेर दिएको हण्डिमा पालिएकाबाहेक बाँकी कांग्रेसीजनको शिर त देउवाको अभिव्यक्तिले अवश्य निहुरिएको होला?
देउवा जति अविवेकि छन, त्यति अनाडी पनि देखिन्छ्न। आम जनताले के अपेक्षा गरेका छन त्यसको ठिक विपरित देउवालगायतका कतिपय नेतृत्व उंभिन्छन। रौटहटमा त्यस्तो क्रूर र बीभत्स हत्या गर्ने गराऊने मतियारको आफ्नै सांसद नाईके आलम गम्भीर फौजदारी अभियोगमा पक्राऊ पर्नासाथ कांग्रेसले तत्काल नै आलमलाई निलम्वन गरेर हदैसम्मको कारवाहिको भागिदार बनाऊनुको साटो उल्टै कांग्रेसविरुद्ध षड्यन्त्र गरिएको भनेर अपराधी नाईके आलमको पक्षमा वकालत गर्नुले कांग्रेस सर्वाङ्गिण नै नाङ्गिएको बुझ्न सकिन्छ। निरन्तर ओरालो लागेको कांग्रेसको साख र अस्तित्व देउवाकै समयमा अझै कति रसातलसम्म पुग्नेहो, यो भने चिन्ताको बिषय हो। यौटा खुंखार अपराधीसम्म चिन्न नसक्ने कांग्रेसले यो देशमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद कायम गर्दछ भनेर अब पनि बिश्वास गरेर बस्न सकिन्छ?